Hazo hiadiana amin'ny fiovan'ny toetrandro: ny Kiri | Fanavaozana maintso
Hazo hiadiana amin'ny fiovan'ny toetrandro: ny Kiri
Iray amin'ireo vahaolana hiadiana ny fiovan'ny toetrandro sy ny fiakaran'ny maripana io ny fitomboan'ny faritra ala. Izany dia satria ny hazo dia mifoka ny CO2 izay avoakantsika amin'ny asantsika sy amin'ny fitaterana. Arakaraka ny maha faritra maitso azy ireo eto ambonin'ny planeta, dia vao mainka horaisina ny CO2.
Na dia miaro ala sy mampitombo ny hektara zava-dehibe amin'ny hoavintsika, ny olombelona manizingizina ny hamotika azy ireo hamokarana hazo na hanaovana varotra amin'izy ireo. Amin'ireo karazana hazo rehetra misy eto amin'izao tontolo izao dia misy iray manokana izay afaka manampy antsika betsaka amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro. Momba ny Kiri.
1 Ala maneran-tany
2 Ilay hazo manampy antsika hanohitra ny fiovan'ny toetr'andro
3 Ahoana no nahafantarana an'io hazo io?
Manerana ny planeta izy ireo dia hokapaina sy ringana manodidina ny 13 tapitrisa hektara isan-taona araka ny angona azo avy amin'ny ONU. Na eo aza ny fiankinan-doha amin'ny hazo miaina sy miaina, dia tapa-kevitra ny handringana azy ireo izahay. Ny zavamaniry sy ny hazo dia havokavokay ary io ihany no fomba ahafahantsika mijanona ho velona satria manome ny oxygen azontsika iainana.
Ilay hazo manampy antsika hanohitra ny fiovan'ny toetr'andro
Ity hazo ity izay afaka manampy antsika amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro dia antsoina hoe Kiri. Ny anarany siantifika dia ny emperora hazo na Paulownia tomentosa. Avy any Chine izy io ary afaka tonga hatramin'ny 27 metatra ny haavony. Ny vatan-kazo misy azy dia mety eo anelanelan'ny 7 sy 20 metatra ny savaivony ary manana sakany manodidina ny 40 santimetatra ny sakany. Ny faritry ny fizarana azy dia mazàna amin'ny haavon'ny ambany kokoa amin'ny 1.800 metatra ary afaka miaina amin'ireo faritra ireo izy na voly izany na ala.
Ny hazo misy ireo toetra ireo dia mifanaraka amin'ny mombamomba ny hazo rehetra. Fa maninona no i Kiri manokana no afaka mandray anjara betsaka kokoa noho ny hafa amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetr'andro?
Ny hazo, zava-maniry ary kirihitra maitso rehetra dia manaingo ny photosynthesize, mandray ny CO2 avy amin'ny tontolo iainana hanovana azy io ary hamoaka oxygen. Saingy, amin'ireo toetra mampiavaka an'i Kiri manokana ho kandidà hanampy antsika amin'ny fiovan'ny toetr'andro dia mahita ny fahafahany manadio ny tany tsy mahavokatra manodidina azy ary koa ny fandraisany ny CO2 dia avo 10 heny noho ny an'ny karazana hazo hafa.
Satria ny tahan'ny fitrohana CO2 dia lehibe lavitra noho ny sisa amin'ny karazany, dia toy izany koa ny tahan'ny famokarana oksizena. Ny iray amin'ireo lesoka amin'ny ala amin'ny ala dia ny fotoana ilain'ireo hazo hitomboana sy ny velaran'ny raviny mba hahafahany mandray anjara ny fifandanjana O2-CO2 an'ny planeta. Na izany aza, ny Kiri dia mitombo haingana kokoa noho ny sisa amin'ireo karazany. Izy io no hazo maniry haingana indrindra amin'ny planeta iray manontolo, ka hatramin'ny valo taona monja dia mety hahatratra ny halavany mitovy amin'ny hazo terebinta 40 taona eo ho eo. Fantatrao ve izany? Fitsitsiana 32 taona amin'ny ala indray. Manamboatra fitoviana hanomezana anao hevitra tsara kokoa, ity hazo ity dia afaka maniry amin'ny tany mahazatra salan'isa 2 santimetatra isan'andro. Izy io koa dia manampy fa amin'ny famerenana indray ny fakany sy ny fantsom-pitomboan'ny taho dia afaka manohitra ny afo tsara kokoa noho ny karazana hafa izy.
Ity hazo ity dia manana fahaizana lehibe amin'ny famerenana amin'ny laoniny satria afaka mitsimoka indray hatramin'ny impito aorian'ny nanapaka azy. Izy io koa dia afaka maniry amin'ny tany sy rano maloto ary, raha manao izany, dia manadio ny tany amin'ny ravina manankarena azota. Mandritra ny androm-piainany dia manondraka ny raviny ilay hazo ary rehefa latsaka amin'ny tany izy ireo dia lo sy manome otrikaina azy. Tokony holazaintsika fa raha maniry amin'ny tany maloto ity hazo ity na tsy misy otrikaina firy, dia hitombo kokoa ny fitomboany noho izy maniry amin'ny tany mahavokatra sy mahasalama. Mba hahavelomany sy hitomboany tsara any amin'ny tany mahantra sy mando dia mitaky rafitra fanangonan-drano sy fanondrahana izy ireo.
Ahoana no nahafantarana an'io hazo io?
Midika hoe "tapaka" amin'ny teny japoney ny anarany. Sarobidy tokoa ny kitapony satria azo amboarina matetika mba hankasitrahana ny fitomboany haingana sy hanararaotra azy ho loharano. Amin'ny finoana sy fomban-drazana sinoa dia namboly io hazo amperora io rehefa teraka ny zazavavy. Noho ny fitomboan'ny hazo faingana dia hiaraka amin'ilay zazavavy mandritra ny fahazazany sy ny fandrosoany izy io, amin'ny fomba iray rehefa voafidy ho vady izy, dia hokapaina ny hazo ary hampiasaina ho an'ny fitaovana mpandrafitra ho an'ny volafadiny ny hazo. .
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Tontolo_iainana » Hazo hiadiana amin'ny fiovan'ny toetrandro: ny Kiri
Hugo ferrari dia hoy izy:
Natolotry ny injenieran'ny ala Josef Krall, any Uruguay, i Kiri ary tsy nandeha ny fitsapana. Nentina izy ireo noho ny fitomboany haingana fa ny holatra kosa tsy nifanaraka tamin'izy ireo. Misy karazana izay tsy avelan'ny fahasamihafan-karazany hanova azy ireo
Valiny tamin'i Hugo Ferrari